त्यसबेला सिलवाल र खनालले चलाएका अप्रेशनहरूः कति छन् नेपालमा नक्कली डाक्टर–इन्जिनियर?
अपराध-सुरक्षा मंसिर ६, २०७७
कति छन् नक्कली डाक्टर–इन्जिनियर?
सीआईबीका एक अधिकारीका अनुसार उजुरी परेका आधारमा कतिपय विषयलाई अध्ययन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। केही विवादीत व्यक्ति र संस्थालाई निगरानीमा राखिएको छ।
Previous Postअनलाइन टिभीलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह
Next Postनेकपाको विवाद मत्थर नहुने, खुला रूपमा हुन थाले पार्टी विभाजनका अभ्यास